इमरान खानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेकोमा पछुतो छैन : रेहम «
प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०७५, मंगलवार ०९:२७
उनले लिगल टिभीमा जागिर सुरु गरिन् । त्यसपछि बिबिसी टेलिभिजनमा काम गरिन् । तर रेहमले बीबीसीको जागिर छोडेर बेलायतबाट पाकिस्तान आइन् । पाकिस्तान आएर एक हाइप्रोफाइल टिभी एंकर बनेकी उनलाई इमरान खानसँग दुईपटक अन्तर्वार्ता गर्ने मौका मिल्यो ।चौरमा बस्दा रेहमलाई थुप्रै लामखुट्टेले हमला गर्‍यो । त्यतिखेरै इमरान अचानक झुके र उनले आफ्नो दुवै हातले रेहमको पिडौंलालाई ढाकिदिए, अन्तर्वार्ताको केही दिनपछि इमरानले रेहमलाई आफूले भेट्न चाहेको बताउँदै एसएमएस पठाए । केही दिन टारेपछि रेहम उनको घरमा गइन्, जहाँ इमरानले विवाहको प्रस्ताव राखे ।
उक्त भेटको सम्झना अहिले पनि रेहमको मनमा ताजै छ । ‘म उनको घर अगाडि उभिएको थिएँ । इमरान चौरमा आफ्नो कुकुरलाई डुलाइरहेका थिए । उनले मलाई आफू भएतिर बोलाए, म हच्किएँ । किनकी मैले अग्लो हिल भएको जुत्ता लगाएको थिएँँ ।’ ‘तर, बीबीसीले मलाई म जहाँ गए पनि आफूसँग हिल नभएको फ्ल्याट चप्पल पनि लैजान सिकाएको थियो । मैले जुत्ता खोलेँ र चप्पल लगाएर इमरान खान भएको ठाउँमा गएँ’ रेहम भन्छिन्, ‘बगैंचातिर जाँदै गर्दा मैले इमरानले मेरो जुत्ता उठाएर मेचको बीचमा राखिदिएको देखेँ । कुकुरले जुत्तालाई नोक्सान नपुर्‍याओस् भनेर त्यसो गरेका थिए ।’
त्यसै बेलामा एउटा रोचक घटना भयो । चौरमा बस्दा रेहमलाई थुप्रै लामखुट्टेले हमला गर्‍यो । त्यतिखेरै इमरान अचानक झुके र उनले आफ्नो दुवै हातले रेहमको पिडौंलालाई ढाकिदिए, मानौं उनले लामखुट्टेबाट बचाइरहेका छन् । रेहम बताउँछिन्, ‘सायद मेरो रगत धेरै मिठो छ । जब उनी बाथरुम गए, त्यतिखेर सयौं लामखुट्टेहरु मेरो खुट्टाको आसपास मडारिन लागे । तर अचानक इमरानले आफ्ना ठूला हातहरुले मेरो पिडौंलालाई ढाकिदिए । म हडबडाएर उठेँ, यो उनको आम छविभन्दा फरक धेरै मायालु र रोमान्टिक रुप थियो ।’
‘त्यति कडा मानिसले यसरी मेरो खुट्टा छुन्छन् भनेर मैले सोच्न पनि सक्दिन’ उनले विगत सम्झँदै भनिन्, ‘त्यही भेटमा उनले मसँग विवाह गर्न चाहेको बताए ।’ ‘मैले तपाईलाई थाहा छ कि छैन म त ४२ वर्ष भइसकेँ भने । इमरानले भने-‘यो त झनै राम्रो भयो । कसैले पनि मैले तपाईंलाई झोलुंगोबाट उठाएर ल्याएँ भन्ने आरोप लगाउँदैनन् ।’ रेहमले इमरानको विवाहको प्रस्ताव स्वीकार गरिन् । लगत्तै उनीहरुबीच मतभेद भयो तर, फेरि कुरा मिल्यो र अक्टोबर २०१४ मा दुवै बैबाहिक बन्धनमा बाँधिए ।
इमरानको प्ले ब्वाई छवि विवाहपछि पनि नरोकिएको रेहमले बताएकी छन् । ‘हामी कसैसँग विवाह गर्दा उनीहरुको पुरानो रेकर्डलाई हेर्छौं तर, हाम्रो ठूलाबडा आन्टीहरुले मलाई विवाह पहिले प्ले ब्वाई भए पनि पुरुषहरु विवाहपछि ठीक हुन्छन् भनेर सम्झाउँथे’ जवाफमा रेहमले भनिन्, ‘तर, यो बिल्कुल गलत कुरा हो, म आफ्नो अनुभवबाट बताइरहेको छु यस्तो हुँदैन ।’
‘कुनै मानिसमा कुनै नराम्रो कुराको बानी लागेको छ भने त्यसलाई बदल्न सक्दैन । मेरो किताबमा एक लाइन छ, जसमा इमरान मलाई भन्छन्, ‘बेबी यू कान्ट टिच एन ओल्ड डग न्यु टि्रक’ यसको मतलब हो, जे गरे पनि उनीहरु सुधि्रँदैनन् ।’
पहिलो दिनदेखि नै इमरान र रेहमबीच दुरी बढ्न सुरु भयो । रेहमका अनुसार इमरानमा केही बाहिरी मानिसहरु र पहिलो पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथको असर पछिसम्म पनि थियो । के इमरान आफ्नी पूर्वप्रेमिका र अर्की महिलाहरुबारे उनीसँग भन्थे ?
इमरानले हदभन्दा धेरै मानिसहरुबारे कैयौं किस्सा सुनाएको रेहमले बताएकी छन् । कुनै पनि पत्नीले पतिले आफ्नो अतीतबारे बताएको मन पराउँदैनन् । तर, इमरान आफ्नी पूर्वपत्नी र पूर्व प्रेमिकाको किस्सा सुनाउन छाडेनन् । ‘मेरो पुस्तक पढेपछि केही महिलाहरुले मलाई सम्पर्क गरे, जो इमरानको जिन्दगीको हिस्सा बनिसकेका थिए । उनीहरुले मेरो पुस्तकमा लेखिएको किस्साहरु इमरानले उनीहरुलाई पनि सुनाएको बताए’ रेहम भन्छिन् ।
७० को दशककी एक अभिनेत्रीसँग इमरानको किस्सा चर्चित थियो । इमरानले रेहमसँग त्यो कहानी सही भएको बताएका थिए । विवाह पहिले त इमरानले म तिम्रो सल्लाहअनुसार काम गर्छु भन्थे तर, विवाहपछि मैले यो कुरा निकालेँ भने उनी मलाई चुप लाग्न भन्थे । इमरानलाई अभिनेत्रीदेखि डर लाग्न थालेको थियो किनभने उनले लण्डनसम्म पछ्याएकी थिइन् ।तर ती अभिनेत्रीलाई चिनेका मानिसले रेहमसँग इमरानले उनको पिछा गरेको बताएका थिए र त्यसपछि तीन अभिनेत्रीले इमरानबारे भनेकी थिइन् ‘नाम बडे और दर्शन छोटे ।’
इमरानको रहनसहन र निजी जीवनका केही चीजहरु रेहमलाई मन परेन । इमरानको क्याम्पबाट पनि उनीविरुद्ध अभियान सुरु भयो ।रेहम भन्छिन्, ‘उनले मेरो बारेमा के सोच्छन् भन्ने मैले बुझ्नै सकिन । करीब एक वर्ष हामीले सँगै बितायौं । उनी मेरो प्रशंसा गरेर थाक्दैनन् । जब म कहीँ गएर आउँथे वा अन्तवार्ता दिएर आउँथे, त्यतिखेर उनी मेरो यति तारिफ गर्थे कि आफैलाई लाज लाग्थ्यो ।’
‘विवाह पहिले त इमरानले म तिम्रो सल्लाहअनुसार काम गर्छु भन्थे तर, विवाहपछि मैले यो कुरा निकालेँ भने उनी मलाई चुप लाग्न भन्थे । मैले राजनीतिको कुरा गरेको उनलाई मन पर्दैनथ्यो ।’ ‘विवाहको केही महिनापछि उनले राजनीतिबारे केही कुरा भन्नु छ भने मलाई लेखेर दिने गर भनेका थिए । किनभने बेलुकाको उनको संगीत सुन्ने समय हुन्थ्यो । मलाई यो कुरा अजीव लाग्थ्यो’ रेहम भन्छिन् ।
रेहमको कुरा मान्ने हो भो इमरानको वरीपरी हुने मानिसहरु र इमरानकै जीवनशैलीले उनलाई टाढा बनाएको थियो । ‘साँचो कुरा गर्ने हो भने मैले अन्तिम समयसम्म उनलाई मनाउने कोशिस गरेँ तर, अपि्रलपछि मलाई यो यथास्थितिको पार्टी हो र इमरानले पनि यसलाई ठीक गर्न सक्दैनन् भन्ने लाग्यो’ रेहम भन्छिन्, ‘धेरै समयसम्म म इमरानमा गलत काम गर्ने मानिसहरुलाई रोक्ने हिम्मत छैन भनेर सोच्ने गर्थें । उनको वरीपरीका मानिसहरु भ्रष्ट पृष्ठभूमिका थिए ।’
‘सम्बन्ध टुटेपछि म यति बेवकुफ कसरी भएँ कि मैले यस्ता मानिसँग विवाह गरेँ भनेर म आँफै सोचमग्न भएँ’ रेहमले भनेकी छन् । ‘केही काम गर्नभन्दा पहिले इमरानले मलाई सोध्ने गर्थे । मैले लगाएको निलो टाई ठीक छ नि भनेर उनले सोध्थे तर, जब मैले राम्रो छ भन्थेँ उनी गुलाबी टाई पहिरिन्थे’, रेहमले लेखेकी छन्, ‘जब तपाईंलाई उल्टो काम गर्नु छ भने मलाई किन सोध्नुहुन्छ भनेर म रिसाउँथे ।’
रेहमको यो पुस्तक इमरान पाकिस्तानको नेशनल एसेम्ब्लीको चुनाव लडिरहेको बेलामा आएको थियो । रेहमले इमरानलाई राजनीतिक रुपले नोक्सान पुर्‍याउन कोसिस गरेको धेरैले चर्चा गरे ।तर, यदि उनको यो उद्देश्य नै थियो भने पनि यसमा उनी सफल भइनन् र इमरानले पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ लिइसकेका छन् ।
इमरानसँग सम्बन्धविच्छेद नगरेको भए तपाईं पाकिस्तानको प्रथम महिला हुनुहुन्थ्यो । तपाईंमा त्यसको कुनै अफसोच छ कि छैन ? रेहमको जवाफ थियो, ‘यस खालको मानिससँग सम्झौता गर्न मेरो लागि सम्भव थिएन । उनी मलाई सधैं नराम्रो व्यवहार गर्थे तर, उनी मुलुकको समस्यासँग जुधिरहेका थिए ।’